Fanasarahana faritra :: Samy hanana distrika telo avy i Vatovavy sy Fitovinany • AoRaha
Fanasarahana faritra Samy hanana distrika telo avy i Vatovavy sy Fitovinany
Vita tanteraka tany ifotony, tamin’ny faran’ny herinandro teo, ny fifanarahana mikasika ny fanasarahana ho roa ny faritra Vatovavy sy Fitovinany. Nambaran’ny Filohan’ny Repoblika, Rajoelina Andry nandritra ny fihaonana niendrika teny ierana tamin’ireo vahoaka sy ireo olomboafidy ary olobe tao Manakara sy Mananjary fa: « samy hanana distrika telo avy ireto faritra ireto ». Handrafitra ny faritra Vatovavy, ny distrikan’i Mananjary sy Nosy Varika ary Ifanadiana. Ny distrikan’i Manakara sy Vohipeno ary Ikongo kosa no ao amin’ny Fitovinany.
Sambany, araka izany, fa nanaraka ambaratonga niainga avy any ifotony ny fandraisana fanapahan-kevi-dehibe eto amin’ny firenena, ka taorian’izay fidinana nataon’ny fanjakana izay notarihin’ny Filoha tany an-toerana izao, dia ny filankevitry ny minisitra no hankatò amin’ny fomba ofisialy ny fijoroan’ny faritra Vatovavy sy faritra Fitovinany.
«Fampanantenana nataoko ny fananganana ny faritra faha23 hizaràna an’i Vatovavy sy Fitovinany ka tsy maintsy tanterahiko. Fizaràna ara-panjakana no ataontsika fa tsy fizaràna hampisaraham-bazana. Tsy hisy intsony ny zanak’Ikalahafa amin’ny fampandrosoana », hoy Rajoelina Andry tao Vinany, tao Manakara, tamin’ny sabotsy.
Niray feo ireo Raiamandreny, Ampanjaka, solombavambahoaka ary ireo ben’ny tanàna ao amin’ireo distrika enina mandrafitra an’ireto faritra roa ireto fa « mitombina ara-jeografia ny fizaràna ary mifanaraka aratantara ». Nofaranana tamin’ny alalan’ny fizaràna nofon-kena mitam-pihavanana ny fihaonana tao Manakara.
Sady nisaotra no nanome tso-drano ny Filoha Rajoelina Andry iretsy olobe iretsy.
Fotodrafitrasa maro no tafapetraka sy mbola hatsangan’ny fanjakana any amin’ny renivohitry ny faritra Vatovavy sy Fitovinany. Ao Manakara, ohatra, no hanokanana ny biraon’ny Fitaleavam-paritry ny Polisim-pirenena vaovao. Miorina ao an-toerana koa ny vato fehizoro nataon’ny Filoha, izay hanamboarana ny rindrina miaro ny sisin-dranomasin’i Manakara Be. Nijery ifotony ny firoson’ny asa fanamboarana ny hopitaly manara-penitra ao Manakara izay efa vita hatramin’ny valopolo isanjato koa ny tenany.
Nozaraina Vatsy tsinjo sy Tosika fameno indray ireo mponina tao amin’ny kianjan’i Manakara, narahan’ny fizaràna jiro mandeha amin’ ny herin’ny masoandro.
Tao Mananjary no nijerena ny fahasimban’ny hopitaly tao amin’ny kaominin’i Namorona, izay tsy maintsy hamboarina, ankoatra ny fizaràna ny sosialim-bahoaka ary ny fitsidihan’ny Filoha ny akany « Tsy manary zaza », izay toerana fandraisana an’ireo tao Mananjary.
Fanambadian’ny mitovy fananahana Naboraky ny kardinaly Tsarahazana Désiré ny fandisoana ny hevitry ny Papa
Baolina kitra – Can 2021 Miandry ny Filoha ny fidiran’ i Côte d’Ivoire eto amintsika
Ady amin’ny kolikoly Nanolotra vahaolana ho an’ny Fitsarana ny HCDDED
Fidongiana fivoriana Mitohy ny antsojain’ireo loholona mpanohitra
Fiarovana vakoka :: Vita ny fanarenana ny lapan’ ny Fitsarana Ambatondrafandrana